Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Iskaashiga Tucson Pima si loo Joojiyo Hoy La'aanta
TPCH waxay ixtiraamtaa asturnaanta adeegsadayaasha internetka iyo booqdayaasha soo booqda. TPCH waxay xaq u leedahay inay tirtirto ama joojiso koontadaada, xannibo emaylkaaga ama cinwaankaaga IP, ama haddii kale joojiso marin u helkaaga ama isticmaalka websaydhka TPCH, isla markiiba iyo ogeysiis la'aan, ku xadgudubka shuruudaha Adeegsiga ama sabab kale.
Adigoo adeegsanaya bartayada, waxaad u qaadataa masuuliyad oo aad fahmi doontaa oo aad u hoggaansami doontaa heshiiskayaga Nidaamka Asturnaanta iyo dhaqangelinta. Adigoo adeegsanaya websaydhka 'TPCH' waxaad aqbashay inaadan dhejin, emayl ama si kale u sameyn waxyaabaha laga heli karo oo sharci darro ah, waxyeelo leh, hanjabaad ah, dhibaateyn ah, dhibaateyn ah, ama sumcad ku ah asturnaanta qof kale.
Markaad buuxiso foomka xiriirka TPCH, waxaad na siineysaa awood toos ah oo aan kugula soo xiriirno taleefanka, emaylka, emaylka ama teknoolojiyadda kale ee la heli karo iyadoo ujeedadu tahay inaan kugu wargalino meelahayaga iyo dhacdooyinkayaga. Haddii aad jeceshahay inaad joojiso wada xiriirka, waa inaad sidaas ku sameysaa adigoo la xiriira TPCH. Uma wadaagi karno, umana qaybin karno ama ma iibin doonno qolo saddexaad iyada oo aan oggolaanshahaaga laga helin mooyee haddii sharcigu na farayo mooyee. Si kastaba ha noqotee, fadlan la soco inaanan dammaanad qaadi karin in qof saddexaad uusan heli doonin rukhsad u helitaanka macluumaadkaaga shakhsiyeed.
TPCH waxay si joogto ah u ururisaa macluumaadka falanqaynta ee ku saabsan bartayada internetka ujeeddooyin maamul. Macluumaadkaan waxaa lagu soo aruuriyaa cinwaanada IP-yada tooska ah, xiriiriyeyaasha ka socda bogagga bannaanka, raadinta magacayaga, goobaha ama habab kale. Macluumaadka noocan ah waxaa laga yaabaa in lala wadaago isku duwayaasha warshadeena si ay nooga caawiso inaan la socono isticmaaleyaasha khadka tooska ah iyo noocyada kale ee macluumaadka si ay nooga caawiyaan dayactirka iyo hagaajinta bartayada.
Markaad na siiso macluumaadkaaga waxaad noo oggolaaneysaa inaan kuu soo dirno agab xayeysiin ah oo ku saabsan soo-jiidashooyinkayaga, casuumadaha munaasabadaha, iyo macluumaad kale oo waxtar leh oo ku saabsan TPCH.
Websaydhkan ayaa laga yaabaa inuu ku xirnaado ilaha ka baxsan iyo bogag kale, oo aynaan xakameynin, oo annagu mas'uul kama nihin waxyaabaha ay ka kooban yihiin, bixinta adeegyada, helitaanka, iyo bixinno kale. TPCH mas'uul kama ahan barnaamijyadan kale ee internetka ka kooban ama dhaqannada asturnaanta.
DIIWAANKA IYO XIRIIRKA
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waa la cusbooneysiin karaa ama / ama loo beddeli karaa si joogto ah ogeysiis la'aan. Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waxaa la qaatay Abril 2019. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan websaydhka TPCH, fadlan kala xiriir TPCH adigoo isticmaalaya foomkeena xiriirka halkan.
SHARCIYADA MUHIIMKA AH EE WEBSITE
1. Kukiyada. "Kukiyada" waa qaybo yar oo xog ah oo laga saari karo oo ay ku kaydsan yihiin biraawsarka internetka isticmaaleha kumbuyuutarka isticmaalaha markii la helo Website-ka kaas oo noo sahlaya in aan la soconno oo aan shakhsiyeyn karno boggeena internetka si kor loogu qaado waayo-aragnimada websaydh kasta. Inta badan daalacashada shabakadu waxay kuu oggolaaneysaa inaad jimicsi ku sameyso cookies-ka lagu rakibay kumbuyuutarkaaga. Waad tirtiri kartaa, xannibi kartaa ama ogeysiisyo ayaa laguu soo diri karaa markii buskudku ku kaydsan yahay kombuyuutarkaaga. Si kastaba ha noqotee, haddii biraawsarka isticmaalaha uu diido buskudka, qaar ka mid ah astaamaha iyo adeegyada Websaydhkan ayaan laga yaabaa inay ku shaqeeyaan si buuxda ama si sax ah.
3. Google Analytics. Waxaan u adeegsanaa aalado gaar ah oo ay bixiso Google, tusaale, Google Analytics, raadraaca Google AdWords Conversion, iyo adeegyada kale ee Google guud ahaan websaydhadeena oo ku meeleeya kuukiyeerka biraawsarka isticmaalaha. Kukiyadaani waxay naga caawinayaan inaan shakhsiyeeyo khibrada websaydhka isla markaana aan kor u qaadno waxtarka websaydhka ee booqdayaashayada. Kukiyadaas waxaa dejiya oo akhriya Google. Si aad uga baxdo raadinta Google, fadlan booqo http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
4. Google AdWords. Waxaan sidoo kale adeegsanaa shaqooyinka iyo agabka AdWords ee Google, oo ay ku jiraan cookies, si aan ugu soo bandhigno dalabkeena iyo adeegyadayada shabakada oo dhan. Waxaan calaamado ku dul dhigeynaa boggaga biraawsarka qaarkood, ka dibna dhinac saddexaad ayaa akhriyaya kuukiishan oo waxaan u adeegi karnaa xayeysiin ah bogga saddexaad ee websaydhka Waxaan u adeegsanaa qalabkan si aan kaaga caawino inaad kuu keento dalabyo aan u maleyno inay ku xiiseyn karaan adiga oo ku saleynaya xulashooyinkaagii hore ee khadka tooska ah. Waad ka bixi kartaa adeeggan adigoo booqanaya xiriirka soo socda: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
5. Diiwaangelinta. Waxaan u isticmaalnaa howlaha Adroll iyo shaqooyinka, oo ay kujiraan pixels, cinwaanada IP, aqoonsiyeyaasha cookie, iyo howlaha dhamaadka-adeegsada websaydhada, ujeedooyin ujeeddo raadis. Taas macnaheedu waa inaan awoodno inaan ku soo bandhigno dalabyadayada iyo adeegyadeena shabakadda oo dhan. Waxaan dul dhigaa astaamaha bogagga biraawsarka, qolo saddexaadna aqriso cookies-yadaas waxaana laga yaabaa inay ku xayeysiiyaan xayeysiista websaydhka saddexaad. Waxaan u isticmaalnaa aaladdan si aan kaaga caawino keenista dalabyo aan u maleyneyno inay xiiseyn karto adiga oo ku saleynaya xulashooyinkaaga internetka ee hore. Waxaad wax dheeraad ah ka baran kartaa oo ku saabsan Adroll halkan: https://www.adrollgroup.com/privacy oo Waad ka bixi kartaa wakhti kasta adoo booqanaya xiriidhada soo socda: www.aboutads.info, networkadvertising.org/choices, ama youronlinechoices.eu ( Yurub oo keliya).
TPCH si ay ugu martigaliso Webinar Fursad Maalgelinta HUD ee Dhawaan La Siideeyay ee Hoyla'aanta Aan gabaad lahayn
Warsidaha TPCH - Juun 2022
TPCH Si Ay U Martigeliso Cusbooneysii Ka Dhaafista Sharciyeynta ee COVID-19 Webinar ee CoC, ESG, YHDP, iyo Bixiyeyaasha HOPWA
Ku Soo Biiraya Caadiga Cusub - Tixgelinta Qorshaynta ee Bixiyeyaasha Hoyga Degdegga ah
U of A Southwest Institute for Research on Women ayaa soo saartay xog cusub oo ku saabsan Nabadgelyo Darrida Guryeynta iyo Warbixinta Hoyla'aanta